Faaqidaadda Toddobaadka, 27 December 2013
Khamiis 27 December 2013
Faaqidaadda Todobaadka: Doorashada Puntland
Barnaamijka Faaqidaadda ee todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorshada madaxtinimada oo bisha dambe ka dhici doonta Puntland.
Faaqidaadda: Heshiiska Xisbiyada Somaliland
Barnaamijka Faaqidaada Todobaadkan waxaan ku eegaynaa Heshiiska ay gaadheen xisbiyada siyaasiga ah ee Somaliland.
Faaqidaadda: Khilaafka Madaxda Soomaaliya
Faaqidaadda toddobaadka waxaan idiinku haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan khilaafkaadka soo noqnoqda ee dhexmara madaxweynayaashii iyo ra'iisul-wasaarayaashii Soomaaliya oo kii ugu danbeeyey u dhaxeeyay Xasan iyo Saacid
Faaqidaadda: Khilaafka Madaxda Dowladda
Barnaamijka Faaqidaaddu wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay khilaafka ka dhex-taagan madaxweynaha iyo ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa berrito la filayaa inay ka bilaabato dood ku saabsan mooshin ka dhan ah RW Saacid.
Faaqidaadda: Soo Noolaynta Tacliinta Sare
Barnaamijka Faaqidaaddu waxa uu ku saabsan yahay dib usoo noolaynta tacliinta sare ee Soomaaliya.
Barnaamijka Faaqidaadda waxa aynu todobaadkan ku eegeynaa khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra'iisul-wasaare Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid"
Faaqidaadda Todobaadka iyo Dhalinyarada Minnesota
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka, waxaa uu ku saabsanyahay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool Maraykankana gaar ahaan gobolka ay Soomaalidu u badantahay ee Minnesota iyo saamaynta ay ku yeesheen dhalinyardii hore ugu biirtay al Shabab.
Faaqidaadda Todobaadka iyo Weerarkii Westgate
Barnaamijka Faaqidaada Todobaadka waxa uu ku saabsan yahay Weerarka lagu qaaday xarunta ganacsiga Westland ee magaalada Nairobi iyo sidoo kale falal qaraxyo ah oo laga gaystay meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka woqooyi bari ee dalkaasi Kenya.
Faaqidaadda Todobaadka iyo Shirkii Brussels
Barnaamijka faaqidaadda ee todobaadkan waxa uu ku saabsanyahay Shirkii Brussels iyo natiijooyinkii ka soo baxay iyo fursadaha Somalia ay ka faa'idaysan karto.
Faaqidaadda: Wareysiga Cumar Xamaami ee VOA
Todobaadkan Barnaamijkii Faaqidaadda Todobaadka waxaan idinkugu bedelnay barnaamij gaar ah oo ku saabsan warysi dheer oo ay Talaadadii la soo dhaafay VOA la yeelatay Cumar Shafiiq Xamaami oo sidoo kale loo yaqaan Abu Mansuur Al-Amrik
Faaqidaadda: Shirka Addis ee Jubooyinka
Barnaamijkeena Faaqidaadda Todobaadka waxa uu ku saabsanyahay shirka arimaha jubooyinka ee wafuu ka kala socota dowladda Somalia iyo Maamulka Jubooyinka Garabka Axmed Madoobe
Faaqidaadda: Shirkii Madaxda AMISOM ee Kampala
Barnaamijka Faaqidaadda ee todobaadkan waxa uu ku saabsanyahay war-murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Kampala ee ay ku kulmeen madaxda wadamada ay ka soo jeedaan Ciidamada AMISOM.